नेपाल आज | सिके राउत किन त्यस्तो भयो ? त्यो खोज्नु पर्छ, पक्राउ गर्नुहुँदैन (भिडियोसहित)
सिके राउत किन त्यस्तो भयो ? त्यो खोज्नु पर्छ, पक्राउ गर्नुहुँदैन (भिडियोसहित)
हरि तिम्सिना मानवअधिकार संगठनका सदस्य हुन् । सिके राउतलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेका कारण यो संगठन केही समयअगाडि विवादमा पनि परेको थियो । त्यो विवाद र वास्तविकता के हो ? भन्ने विषयसमेतलाई जोडेर हामीले संगठनका सदस्य हरि तिम्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सारः
‘नेपालमा मानब अधिकार रक्षाको स्थिति राम्रो छैन । पीडितहरु पीडामा छन् । पीडकहरुले पहुँचका आधारमा छुट पाएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघन गरिए । धेरै घरबारबिहीन भए । आफन्त गुमाए । अहिले पनि न्याय माग गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पनि निर्मला हत्याप्रकरणमा पनि न्याय नपाएको अवस्था छ ।
उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको केसमा व्यक्तिलाई जेलमा राखिन्छ । अस्पतालमै मरेको अवस्था छ । सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस माग गरेका छन् । सीके राउतको माग सम्बोधनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कार्यक्रम गरेको आधारमा वाकस्वतन्त्र पनि त हुन्छ नी । पटक पटक किन समात्ने त्यसले झन बिद्रोह जन्म हुन सक्छ । सरकारले गाली गर्नु भएन । वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गर्नुपर्छ । नत्र झन बिद्रोह जन्माउँछ ।
सिके राउतले नेपाललाई गाली गर्छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । सिके राउत बिद्राही भएर किन खनियो भनेर बुझ्नु प¥यो । विखण्डनको नारा लगाएर हिड्नु अपराध हो । सिके राउतलाई वार्ताको माध्यमवाट बोलाउनुपर्छ । अपराधी कुन हिसावले भयो सिके राउत । उसलाई कार्यक्रम गर्न नपाउँदै पक्राउ गरिएको छ । त्यसले झन विद्रोही भावना उत्पन्न हुन सक्छ सिके राउतका कार्यकर्तालाई ।
प्रचण्ड र बाबुरामले माओवादी द्वन्द्व चलाएर हिंँड्नुभयो । देशमा द्वन्द्व मच्चाएर आतकिंत बनाएर हिंँड्नु माओबादीको कुरा भयो । सिके राउतले व्यक्तिगत रुपमा बोलेका छन् । यो देशमा काम गर्छु भनेर हिंड्छन् त्यसले आरोप खेप्नुपर्छ । आरोप लगाउन सजिलो छ । हामीहरुको काम देशमा भईरहेको मानब अधिकारको केसमा बोलिरहेका छौं । त्यो बोल्दा मान्छेको बुझाईमा भर पर्छ ।
हामीले काम गर्छौं । एक पक्षको चित्त नबुझ्दा हामीले आरोप खेप्नुपर्छ । हामी हरेक बिषयमा बोलेका छौं । हामीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको बिषयमा पनि पटक पटक बिरोध गरिरहेका छौं, बम पड्काएको विषयमा । पीडितपक्षमा हामी बोलिरहेका छौं त । विप्लव र सरकारबीच मानवअधिकार उल्लंघनका कुरा गर्दा सरकार नै अगाडि छ । विप्लवले पनि आतंक मच्चाईरहेको छ । तर, सरकार पक्षबाट झन बढी उल्लंघन भएको छ । उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाउँदा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रदर्शनकारीलाई जेलमा राखियो । तर, हिरासतमा हुँदै ती व्यक्तिको मृत्यु भयो । सो बिषयमा सरकारले छानविन नै गरेन ।
निर्मलाको हत्या भएको तीन महिना पुग्यो । न्याय माग्दा निर्मलाका बुवाले समेत मानसिक सन्तुलन गुमाए । यो प्रकरणमा केही प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरकारले बर्खास्त ग¥यो । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । ती प्रहरी अधिकृतविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दर्ता हुनुपर्छ ।
सिके राउतलाई हामी किन नेगेटिभ लिन्छौं ? सिके राउतभन्दा खतरा मान्छेहरु पनि छन् त । अनुसन्धान कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुरा हो । अपराधी पत्ता लगाउने र पहिचान गर्ने दायित्व राज्यको हो । हामी न्यायका लागि लड्छौं, लडिरहन्छौं ।